﻿﻿	ဟော်မုန်းမပါသော IUD (သားအိမ်တွင်းထဲ့ကရိယာ) | Find My Method
ဖျောက်ရန်လွယ်ကူသည်။ သင်ရဲ့သားအိမ်ထဲထည့်ပေးလိုက်တဲ့ ဟော်မုန်းမပါသော ပလတ်စတစ် နဲ့ ကြေးနီ ပစ္စည်းလေးတစ်ခု။
ထိရောက်မှု- IUDs များသည်အထိရောက်ဆုံးသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကိုအသုံးပြုသူ ၁၀၀ လျှင် ၉၉ ယောက်သည် ကိုယ်ဝန်ကို တားဆီးဖို့ စီမံနိုင်ပါမယ်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ – သွေးဆင်းမှုနှင့်အောင့်ခြင်းကို များစေနိုင်သည်
အားထုတ်ရမှု- နိမ့်။ ဒါကို တခါထဲ့ထားပြီးလျှင် နှစ်ရှည်ကြာခံသည်။
ဟော်မုန်းမပါသော IUD အကျဉ်းချုပ်
IUD သည် T-ပုံ ပလပ်စတစ်နှင့်ကြေးနီ အပိုင်းအစလေးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၄င်းကို သင့်သားအိမ်ထဲသို့ ထည့်သွင်းထားရသည်။ ကြေးနီသည်သားအိမ်ဝန်းကျင်ကိုအနည်းငယ်ပြောင်းလဲပေးပြီး သုက်ပိုးကို မျိုးဥသို့မရောက်စေရန် တားဆီးပေးသည်။ သင်ရရှိသော IUD ပေါ် မူတည်၍ IUDများသည် ကိုယ်ဝန်ကို ၃ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အထိကာကွယ်ပေးသည်။ သင်ကိုယ်ဝန်ရလိုလျှင် IUD ကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်။
သုံးပြီး မေ့ထားလိုက်နိုင်၏။ သန္ဓေတားနည်းကိုမှတ်မထားလိုပါက IUD သည်သာ သင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုထည့်ထားပြီးလျှင် ၃ နှစ်မှ ၁၂ နှစ်အထိထားနိုင်သည်။
လက်သုံးရန်မလို။ ဆေးဆိုင်သို့သွားယူရန် အထုပ်များ သို့မဟုတ် ဆေးညွှန်းများမရှိပါ။ ပျောက်ဆုံးသွားစရာ မေ့လျော့သွားစရာ မရှိပါ။
လုံးဝ မသိနိုင်။ မည်သူမှ သင့်မှာ IUD ရှိကြောင်းမပြောနိုင်ပါ။ (အချို့သောအမျိုးသားများက ကြိုးလေးများကိုစမ်းမိသည်ဟု ပြောသော်လည်း၊ ထိုသို့ရှိကြောင်း မည်သူမျှမသိနိုင်ပါ။ ) ထုပ်ပိုးထားစရာ၊ လိင်မဆက်ဆံခင်လေးတွင် လုပ်စရာ ဘာမှမလို။
အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်အတွက်လုံခြုံပြီးစိတ်ချရ။ ကျွမ်းကျင်သူအများစုက ကျန်းမာပြီး သားအိမ်ရှိလျှင် IUD နှင့် အသင့်တော်ဆုံးဟု သဘောတူကြသည်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ် ကိုယ်ဝန်မရှိဖူး၊ ကလေးမရှိဖူးသည့်တိုင် ၎င်းသည်မှန်ကန်စိတ်ချရသည်။ ၎င်းသည် မိခင်အသစ်များအတွက် (သင်နို့တိုက်နေလျှင်တောင်မှ) ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကိုယ်ဝန်အတွက်မေးစရာ။ IUD ကိုဖယ်ရှားပြီးနောက် ကိုယ်ဝန်အမြန်ရလွယ်သင့်သည်။ အကယ်၍ သင့် IUD ကိုထုတ်ယူပြီးသည်နှင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါက အခြားနည်းလမ်းတခုခုဖြင့် ကာကွယ်ထားရှိရန်သေချာပါစေ။
ရရှိနိုင်မှု။ သင် ဒီနည်းလမ်းကိုသုံးချင်ပါသလား? ဤနည်းလမ်းကို နေရာများစွာတွင် ရရှိနိုင်သည်။ သင်၏ဒေသဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနများ၌သာမေးမြန်းပါ။
IUD ရရှိရန် ပထမအဆင့်မှာသင်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူနှင့်ပြောဆိုရန်ဖြစ်သည်။ သူက သင့်အားမေးခွန်းများမေးပြီး IUD သည်သင့်အတွက် သင့်လျော်မှုရှိမရှိစစ်ဆေးပေးလိမ့်မည်။
သင် IUD ကို မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ထည့်နိုင်သည်။ အချို့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများက ရာသီလာချိန်မှာ ၎င်းကို ထည့်သွင်းလိုသော်လည်း၊ သင့်တွင်ကိုယ်ဝန်မရှိကြောင်း သေချာသရွေ့ ဘယ်အချိန်မဆိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ရာသီအလယ်တွင်ပြုလုပ်ရန်အဆင်ပြေဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် (ဆိုလိုသည်မှာသင်၏သားအိမ်ခေါင်းဝ အပွင့်ဆုံးအချိန်ခါ) 
IUD ကိုထည့်သောအခါ အနည်းငယ်အောင့်ခြင်းကို ခံစားရလေ့ရှိသော်လည်း အနားယူပြီး သို့မဟုတ် နာပျောက်ဆေးများဖြင့် သက်သာသွားလိမ့်မည်။ အချို့အမျိုးသမီးများသည် မူးဝေဝေခံစားရနိုင်သည်။ IUD အထဲသို့ရောက်သည်နှင့် သင်၏လိင်အင်္ဂါထဲသို့ တွဲကျထားသောကြိုးငယ်လေးကို သင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ထိုအရာဖြင့် IUD ကို နောက်ပိုင်းတွင် ဖယ်ရှားနိုင်အောင်ပင်ဖြစ်သည်။ (ကြိုးလေးများသည်လိင်အင်္ဂါအပြင်ဘက်ထွက်မလာပါ။) 
ထိုအရာထည့်သွင်းပြီးနောက် နေရာတကျရှိကြောင်းသေချာစေရန် ကြိုးတန်းလေးများကို တစ်နှစ်လျှင် အကြိမ်အနည်းငယ် စစ်ဆေးသင့်သည်။ ဤသို့လုပ်ရန် :
လက်ကိုဆပ်ပြာနှင့်ရေဖြင့်ဆေးကြောပြီး ထိုင်ပါ သို့မဟုတ် ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ပါ။
သင်၏လက်ချောင်းကို မိန်းမကိုယ်ထဲထဲ့၍ နှာခေါင်းဖျားကဲ့သို့မာအိအိ ခံစားရနိုင်သည့် သားအိမ်ခေါင်းကို စမ်းပါ။
ကြိုးလေးများကိုစမ်းကြည့်ပါ။ စမ်းမိလျှင် ဂုဏ်ယူပါတယ်။ သင်၏ IUD သည် အဆင်ပြေပြေရှိနေသည်။ သို့သော် IUD ၏အမာပိုင်းကို သားအိမ်ခေါင်းတွင်စမ်းမိလျှင်၊ ၎င်းကိုချိန်ညှိဖို့ (သို့) အစားထိုးဖို့လိုကောင်းလိုမည်။
ကြိုးများကိုမဆွဲပါနှင့်။ ထိုသို့စမ်းမိပါက IUD သည် နေရာမှရွေ့ထွက်သွားနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ကြိုးများကိုစစ်ဆေးရန်အဆင်မပြေပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအား ထည့်သွင်းပြီးနောက်တစ်လ၊ ထို့နောက်နှစ်စဉ် စစ်ဆေးစေနိုင်သည်။ .
လူတိုင်းသည် မတူညီပါ။ သင်တွေ့ကြုံခံစားရသောအရာသည် အခြားသူနှင့်မတူနိုင်ပါ။
ကောင်းတဲ့အချက်များ – IUDများနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သာမကသင်၏လိင်မှုဘဝအတွက်ကောင်းမွန်သောအရာများစွာရှိသည်။
သိပ်အားမထုတ်ရပဲ အထူးတလည် ရေရှည်ကာကွယ်မှုရ၏
ဆေးလိပ်သောက်သူများ၊ သွေးတိုးရောဂါနှင့်ဆီးချိုရောဂါရှိသူများအတွက် ဘေးကင်းတယ်
IUD တွေက သင့်ဟော်မုန်းပမာဏကို မပြောင်းလဲစေပါ
မကောင်းတဲ့အချက်များ – လူတိုင်းဟာ အနုတ်လက္ခဏာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို စိုးရိမ်ကြတယ်၊ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးများစွာအတွက်မူ ၎င်းတို့သည်ပြသနာမဟုတ်ပါ။ အမျိုးသမီးအများစုသည် IUD ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်အသားကျလာသော်လည်း ထိုသို့ဖြစ်ရန် လအနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။
ရာသီကြားကာလတွင် သွေးစက်ဆင်းခြင်း (အထူးသဖြင့် ထဲ့ပြီးစ လအနည်းငယ်တွင်)
IUDက သားအိမ်နံရံအား တွန်းနေခြင်း
အကယ်၍ သုံးလကြာပြီးနောက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို သင် ခံနိုင်သည်ထက်ပိုပြီးခံစားရသည်ဆိုလျှင်၊ နည်းလမ်းများပြောင်းပြီး ကာကွယ်ထားပါ။ လူတိုင်း၊ နေရာတိုင်းအတွက် နည်းလမ်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ သတိရပါ။
သင့်ကိုကူညီဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဒီမှာရှိပါတယ်။ အကယ်၍ ဒါကို မကြိုက်သေးဘူးလို့ခံစားရရင်၊ ကျွန်တော်တို့မှာအခြားနည်းလမ်းတွေအတွက် အကြံဥာဏ်တွေရှိပါတယ်။ သတိရလိုက်ပါ : အကယ်၍ နည်းလမ်းများကို ပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၊ သင်ပြောင်းနေစဉ် ကာကွယ်ထားရန် သေချာပါစေ။ ကိုယ့်လိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့နည်းလမ်းကိုရှာနေတုန်းမှာ ကွန်ဒုံးတွေက ကာကွယ်မှုကောင်းကောင်းပေးပါတယ်။
ငါ့ IUD က ငါ့အဖော်ကို နာကျင်စေမလား။
IUD က သင့်အဖော်ကို မနာကျင်စေသင့်ပါ။ IUD ကြိုးလေးများသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ် ယောက်ျားများကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဟုသင်ကြားဖူးပေမည်။ သို့သော် အများစုသည်ကြိုးများကို မခံစားရပါ။ သင့်အဖော်က ၎င်းအနှောင့်အယှက်များကိုခံစားမိပြီး စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါက သင်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူက ၎င်းတို့ကို တိုပေးနိုင်သည်။ ထို့ပြင် ၄င်းတို့သည် များသောအားဖြင့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပျော့ပြောင်းလာ၏။
အလုပ်မဖြစ်သေးပါ သင့်ရာသီစက်ဝန်းအတွင်း အက်စထရိုဂျင်ဟိုမုန်းကို ထောက်ပံ့ပေးသောနည်းလမ်းတစ်ခုနှင့် ပို၍သင့်တော်ပါစေမည်။ ဆေးလုံး, ကပ်ခွာပြား ဒါမှမဟုတ် အဝိုင်းကွင်း ကိုစဉ်းစားပါ
နည်းလမ်းအတော်များများတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် သွေးစက်ကျဆင်းခြင်းသည် သင်ထင်သလောက် သွေးကိုများစွာဆုံးရှုံးစေသည်မဟုတ်ပါ။ 
အကယ်၍ ရာသီသွေးများလာခြင်း သို့မဟုတ် အောင့်ခြင်းတို့ဖြစ်ပေါ်လာပါက ဘာလုပ်ရမလဲ?
ဤသည် IUDများတွင်လပုံမှန်ဖြစ်သည်။ လအနည်းငယ်စမ်းကြည့်ပါ၊ ibuprofen အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးကို သင့်ရာသီ၏ပထမရက်ပိုင်းမှာ သောက်ပါ။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ IUD ကို သုံးရလွယ်ပေမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက အချိန်နဲ့အမျှသက်သာမလာ ဒါမှမဟုတ် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေနဲ့ပိုကောင်းမလာရင် ဟိုမုန်းပါသော IUS သို့မဟုတ် implant ကိုပြောင်းသုံးကြည့်ပါ
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်- implant ၊ IUS
ငါ ကိုယ်ဝန်ရချင်တယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
သင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူအား IUD ကိုဖယ်ရှားရန်ပြောပါ။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ် ချက်ချင်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သင့်ပြီး သင် စတင်ကြိုးစားနိုင်သည်။ 
ငါ့ IUD ထွက်ကျလာခဲ့တယ်။ နောက်တစ်ခါထပ်ဖြစ်ဦးမလား။
IUD ထွက်ကျလာခြင်းကို အမျိုးသမီးများ ၂-၁၀% တွင် ထည့်သွင်းပြီးတစ်နှစ်တွင် ဖြစ်နိုင်သည်။ IUD
ထွက်ကျလာခြင်းပိုဖြစ်နိုင်သော အမျိုးသမီးများမှာ :
အသက် ၂၀ ထက်ငယ်သူ
အလွန်များသော သို့မဟုတ် အလွန်နာကျင်သည့်ရာသီလာခြင်းဖြစ်ဖူးသူ
မီးဖွားပြီးပြီးချင်း သို့မဟုတ် ဒုတိယသုံးလပတ်ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျခဲ့ပြီး IUD ထည့်သွင်းခဲ့
တစိတ်တပိုင်းထွက်လာခြင်းသည် IUD နေရာမှန်မရှိခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ သားအိမ်တွင်းအတော်နိမ့်သည့်နေရာတွင်ရှိခဲ့၍ ထွက်လာခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ထည့်သွင်းသည့်အချိန်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည် သို့မဟုတ် သားအိမ်၏ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်ဆက်စပ်သော အရွယ်အစား၊ ထောင့် (သို့) အသားလုံးကဲ့သို့ ပုံသဏ္ဍန်မမှန်စေသော အခြေအနေများရှိနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ IUD ထွက်ကျလာသောအမျိုးသမီးများအတွက်ဒုတိယ IUD ထွက်ကျရန်အခွင့်အလမ်းသည် ၂၀% တွင် (အချို့သောလေ့လာမှုများတွင် ၃၀% အထိ) ရှိနိုင်သည်။ 
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ IUD ကို သုံးရလွယ်ပေမယ့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက အချိန်နဲ့အမျှသက်သာမလာတာ ဒါမှမဟုတ် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေနဲ့ပိုကောင်းမလာရင် တာရှည်ခံပြီး ထိန်းသိမ်းရန်သိပ်မလိုသောရွေးချယ်ခွင့် implant ကို ပြောင်းသုံးကြည့်နိုင်သည်။